Rooble oo kulankiisii u danbeeyay ee golaha wasiirada gudoomiyay. - Jowhar somali news leader
Rooble oo kulankiisii u danbeeyay ee golaha wasiirada gudoomiyay.
By Master	 On Jun 21, 2022
June 21 (Jowhar.com)-Ra’iisul Wasaaraha XFS ee shaqada ka sii tagaya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta guddoomiyay shirkii ugu dambeeyay Golaha Wasiirrada, kaas oo dib loogu eegay howlihii u qabsoomay Xukuumaddiisa muddadii ay shaqeyneysay.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa xubnaha Golaha Wasiirrada ugu mahadceliyay sidii wanaagsaneyd ee ay ula soo shaqeeyeen, isagoo kula dardaarmay sii wadista howlaha qaranka iyo gacan siinta Ra’iisul Wasaaraha magacaaban iyo dowladda cusub.
Qaramada Midoobe oo sheegtay in 200 Caruur ah ay nafaqo…
Wararkii u danbeeyay dil Muqdisho loogu geystay Macalin…
Mr. Rooble ayaa ka shakeeyay shaqadii wanaagsaneyd ee ay dalka ka soo qabteen mudadii labada sano eheyd ee uu xafiiska fadhiyay, isagoo dhinaca kalena taabtay caqabadaha kaga imanayay dhinacyo uu kamid yahay madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo, wuxuuna ku faanay in iyadoo waxaasoo dhiba ay jireen uu dalka gaarsiiyay doorasho oo soo idlaatay.
Si kastaba, Ra’iisul wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barre ayaa lagu wadaa in maalininada Arbacada ah la horgeeyo golaha shacabka, waxaana loo badinayaa in codka kalsoonida la siin doono, iyadoo intaasi kadibna uu si toos ah xafiiska u fariisan doono oo uu shaqada ugala wareegi doono Rooble.
Master 824 posts
Deni iyo Karaash oo heshiis hordhaca ah ka gaaray khilaafkooda.
Afar kamida Kooxdii dilalka iyo qaraxyada ka geysan jirtay Boosaaso oo dil toogasho lagu xukumay.
Qaramada Midoobe oo sheegtay in 200 Caruur ah ay nafaqo darro ugu dhinteen…
Wararkii u danbeeyay dil Muqdisho loogu geystay Macalin Jaamacadeed.
NISA oo Muqdisho ku qabatay kooxo watay bistoolado iyo agabyo kale.
IGAD oo maanta shir uga furmayo Nairobi iyo Mahdi Guuleed oo Soomaaliya metelaya.
Algeria celebrates 60 years of independence from France in gentle of strained…
hanad	 Jul 5, 2022
Dozens killed in two suspected jihadist assaults in Burkina Faso
French Cornet and Tan crash within the fourth spherical of Wimbledon
Burhan says the military plans to make approach for a civilian…